USergei Lazarev: impilo yomuntu siqu. Ingabe ingumama (ohlaza okwesibhakabhaka)? Kungani uSergei Lazarev noLera Kudryavtseva baqeda?
Ukuqhekeza esigabeni sasekhaya nge-ballad "Belle", okwenza njengengxenye ye-duet ethi "Smash !!", uSergei Lazarev wavele waba yisigidi sezigidi. Kusukela ngaleso sikhathi, sekudlulile iminyaka engu-15, kodwa ibutho labalandeli abaqotho balo mculi alizange linciphise. Uma ethandwa kakhulu umculi, isithakazelo esengeziwe ababukeli abanalo nalokho okwenzeka kuye ngaphandle kwendawo. USergei Lazarev, obhekene nokukhulumisana okufudumele ku-intanethi iminyaka eminingi, akuyona into ehlukile.
Ubuntwana nentsha kaSergei Lazarev. Umndeni kanye nezinyathelo zokuqala esiteji
Umculi wekusasa wazalwa eMoscow. Lapho uSergei esemncane kakhulu, abazali bakhe, u-Valentina Viktorovna noVyacheslav Yurievich, bahlukanisile. Lesi sinqumo samukelwa ngumama kaSergey, eqaphela ukuthi umshado wawuqhuma emasontweni. Owesifazane wayengesabi ukushiywa yedwa nezingane ezimbili (umfowabo kaSergei uPavel usemdala kuye iminyaka emihlanu). UVyacheslav wabuyisela umkakhe: ushiye lo muntu wathatha yonke imali eqoqiwe, washiya umndeni ngaphandle kwemali. Emzamweni womuntu oshade naye ukukhalela unembeza, le ndoda yaphendula ukuthi ishiye indlu kanye nodonga. U-Valentine Viktorovna wakwazi ukuzakhela ibhizinisi lakhe, ngakho-ke umndeni wawudinga lutho, naphezu kokuthi ubaba akazange akhulume nezingane. Umhlangano wokuqala noyise okokuqala ngqá eminyakeni eminingi wenziwa nguSergei lapho esevele edumile. Kodwa-ke, lokhu kwakuyisivivinyo esiyinkimbinkimbi kule nsizwa - lo wesilisa wayengenasithakazelo emndenini wangaphambili, kodwa waziqhenya ngoSergei indodana yakhe encane.
Ngesikhathi esemncane, umculi wesikhathi esizayo wayebandakanyeka ekuzivocavoca, kodwa eneminyaka engu-9 ubudala, lo mdlalo waya ngemuva, futhi uSergei wayejabule ngomculo naseshashalazini. Kanye nomfowabo omdala, wahlala iminyaka emibili eqoqweni okuthiwa iLoktev, ngenkathi eseya esiteshini sezemidlalo eBoris Pokrovsky. Isiqalo esiyimpumelelo emisebenzini yomculo yaseLazarev kwakuyiqembu lezingane elithi "Neposedy", lapho efika eminyakeni engu-12.
Kwakuyi "Fidget" ukuthi uLazzarev wayazi uVlad Topalov, owathola ngo-2001 iqembu elithi "Smash !!!". Leli qembu lalithandwa kakhulu, kodwa lahlala iminyaka emithathu kuphela. Kuze kube manje, imbangela yokuwa komsebenzi ophumelelayo ahlala engaziwa.
USergei Lazarev esiteji
Ngemva kokuqeda iziqu, uSergei Lazarev unquma ukuxhumanisa ukuphila kwakhe nemidlalo yaseshashalazini. Njengoba esehambise amadokhumende ezinkampanini eziningana zokusebenza, wangena eShikchukin School naseMoscow Art Theater School, lapho enquma ukuyeka khona. Kakade ngonyaka wesibili, uSergei udlala indima edlala "iRomao noJuliet", eyayisiteji seTheatre. I-Pushkin.
Esiqongweni sokudumeka kwe "Smash !!" Lazarev uvikela le mfundiso, edlala kudlalwa "Ezinsukwini ezimbalwa ekuphileni kuka-Alesha Karamazov." Ukuze ukusebenza "Lend Tenor" Sergei Lazarev wathola imiklomelo emibili "The Seagull" kanye "Crystal Turandot". Namuhla Lazareva ingabonakala indima enkulu ekusebenzeni kweTheatre. I-Pushkin "Umshado We-Figaro".
ULera Kudryavtseva noSergei Lazarev: ukuphila phambi kwekhamera
Kusukela ngo-2008, uSergei uqala ukuhlangana nomethuli we-TV uLera Kudryavtseva, owayengumdala kunomculi iminyaka engu-12. Ngaphambi kwalokho, lo mculi akazange abonwe kunoma yimuphi ubuhlobo obuhlala njalo: waya emihlanganweni ehlukahlukene ngamantombazane ahlukene. Ngokokuqala ngqa mayelana neveli likaLazarev noDudryavtseva baqala ukukhuluma "kwi-Wave entsha" eJurmala. Abahleli bakhetha uLououx noSergey njengabaningi emncintiswaneni. Futhi uma uDudryavtseva esevele enesipiliyoni esikhulu ekuqhubeni izinhlelo, khona-ke uLazzarev kwaba yinto yokuqala. Phakathi nomsebenzi ohlangene, lo mbhangqwana wachitha isikhathi esiningi ndawonye, ​​futhi kungekudala ukukhulumisana okukhulu kwakhula kwaba yinto engaphezulu. Kodwa-ke, lo mbhangqwana washesha ukuphikisana nezinkulumo zabasebenzi kanye nezintatheli, bethi phakathi kwabo kuphela ubungane nomsebenzi.
Naphezu kobuhlobo "obungane" kuphela, uDudryavtseva noLazarev babevame ukuhlangana ndawonye, ​​ngakho uLera noSergey baqala ukukhuluma ngeveli njengendlela accomp accompli. Ubudlelwane bukhula ngokushesha, futhi abathandi abazange basheshe baqoqe. Izinkanyezi zazihlala ngayinye endlini yazo, ngenkathi zibiza omunye nomunye, futhi zizovakashela. On imibuzo mayelana lomshado, bobabili kubhekiselwa ukucindezeleka.
Abathandi babehlala bebona. Bonke baqhuba imincintiswano yomculo ethandwa kakhulu nemikhosi, bahlanganyele kumaphrojekthi we-TV. Kwaphela iminyaka emine, yikuphi iDudryavtseva neLazarev ababekanye ndawonye, ​​babhekwa njengababili bebhizinisi lezentengiselwano ezifuywayo.
NgoJulayi 2011, kwaziwa ukuthi ukukhulelwa kwesisu kwenzeka ngenyanga yesibili yokukhulelwa kukaLera. USergei wayekude nomthandekayo wakhe futhi ngazo zonke izindlela wawusekela. Ngalezo zinsuku, lo mculi wahlukana okokuqala kubalandeli bakhe, abafisa impilo kaLera. ULazarev wabhala ekhasini lakhe enkundleni yokuxhumana:
Kuyangimangaza ukuthi ngokushesha izindaba ezimbi zisakazeka kanjani !!! Futhi umbuzo: "Uzizwa kanjani manje!" Wonke umuntu ufuna ukunikeza n ***** wakhe! Siyabonga konke ngokusekela kwakho !!! Kuzwakala. Kodwa ake singakhulumi ngalokhu. Hhayi leso simo! Isihloko sivaliwe. Leray kungcono.
Usizi oluvamile lwaletha lo mbhangqwana osondelene ndawonye okwesikhashana. U-Lera uhlele ukwenza izifundo zokwelapha ezinyangeni eziyisithupha, emva kwalokho wayethemba ukuthi uzokhulelwa futhi. Noma kunjalo, ekwindla ukuphahlazeka kuvele ebuhlotsheni. Kancane kancane, uSergei noLera baqala ukuzihlukanisa. Bachitha isikhathi esingaphansi komunye nomunye, futhi kuphela kwimicimbi esemthethweni babesabonakala ndawonye.
Ngokushesha lo mbhangqwana wamemezela ngokusemthethweni ukuhlukaniswa. Isizathu saba imizwa ebanda. ULera wavuma ukuthi wayephupha ngomndeni ogcwele, futhi uSergei wazinika isikhathi esiningi emsebenzini wakhe. Ngokushesha u-Lera waqala ubudlelwane nomdlali weHockey Igor Makarov, oshesha ngokuphela ngomshado ohlakaniphile. Ngokumangazayo, u-Kudryavtseva noLazarev babehlala bangabangane abahle, futhi ngemva kwesikhashana baqala ukusebenza ndawonye njengabahola.
USergei Lazarev kanye nomlando wakhe ongavumelani ...
Ngaphambi kokuba uSergei Lazarev aqale ukuhlangana noLera Kudryavtseva, kuyi-Intanethi kwakukhona amahemuhemu aqhubekayo mayelana nokuma kwezingoma zomculo. Ngempela, kuyinto engavamile - kuLera akukho mculi owaziwayo nganoma yimuphi intombazane. Bathi ubenenkinga nendodakazi yomuntu othile osomabhizinisi, kodwa izithandwa "zazibethelwa ngokucophelela" kangangokuthi ngisho ne-paparazzi enamahloni ayitholanga igama lomthandi noma yenza okungenani isithombe sombhangqwana. Inanveli noLoyoy yanciphisa indlela yokuqhamuka komculi odumile, kodwa imizwa ababoniswa ngayo phambi kwamakhamera, abaningi abazange bakholwe.
Ngesikhathi uLera elahlekelwa ngumntanakhe, abezindaba babika ukuthi unina womethuli wayebike ukuthi indodakazi yakhe ayikhulelwe iLazarev. Ngesikhathi esifanayo, lo wesifazane wabiza ngokuthi umkhwenyana ongaphumelelanga "okwesibhakabhaka."
Kodwa u-Butar Otar Kushanashvili uphinde wathululela amafutha emlilweni, ethi iDudryavtsev noLazarev babambene kuphela ngokuthenga kanye nobungane. I-Ksenia Sobchak ekhohlisayo ngisho nezwe lonke yamemezela ukuthi uSergei Lazarev - gay. Kwaphela isikhathi eside uLazarev wabizwa ngeveli enomqondisi wakhe uMikhail Dvoretsky, owayengumngane owayejwayele kusukela esikhathini seqembu elithi "Smash !!". U-Butler usize lo mdwebi ukuba aqale umsebenzi wakhe ophumelele, wabamba iqhaza ekwakhiweni nasekukhuthazeni iLazarev.
Kuvumelana nomqondo wakhe, njengoba bethi, futhi "inkaba" phakathi kukaDudryavtseva noLazareva yasungulwa. Kulesi simo, ezithombeni eziningi uButler wayehlala ehlathini, hhayi isinyathelo esisodwa kude nesigceme sakhe:
Namuhla uMichael wathola injabulo yakhe nomunye. Okhethiweyo wakhe wayengumsebenzi ka-Aeroflot Ivan, umqondisi uLazarev, ngokusho kwamahemuhemu, oshade naye. I-Butler ngokukhethekile ayifihli ukuma kwayo futhi kuyi-Internet ungathola izithombe eziningi ezihlangene nabathandekayo bakho:
Ngokuqondene nokuphila komuntu siqu kukaSergei Lazarev, izintatheli zikwazi ukuqoqa umlando wangempela. Uma kuqhathaniswa nezithombe ezivela kubhulogi lomculi nezithombe zomngane wakhe uDmitry Kuznetsov, izintatheli zenze isiphetho esizwakalayo: abantu abasha abazange bahlukanise iminyaka ecishe ibe mithathu, futhi bahlala behamba ndawonye ndawonye.
Izithombe ezithathwe endaweni efanayo zivela emakhasini kaSergei noDmitry, ukuze izintatheli zingakwazi ukuziqhathanisa kalula.
Ubani ngempela uJamala? Mayelana nokuphila komuntu womnqobi we-"Eurovision-2016" ulapha .
Kodwa-ke, ukuphila komuntu siqu kaSergei Lazarev, okuthandayo ababukeli kakhulu, kuyindaba yakhe yangasese. Kungakhathaliseki ukuthi umculi uhlanganyela kanjani nombhede wakhe, naphezu kokuba engenawo umfazi nezingane, lo mculi unethalente elingenakuphika kanye nomoya wokumangalisa owamane kuphela owandisa ibutho labalandeli bakaSergei Lazarev.
Iqiniso lonke ngomfazi omusha kaFilip Kirkorov nobuhlobo bakhe noKozlovsky noLazarev ulapha .
Yisiphi ukuhlinzwa kwepulasitiki eyenza u-Anastasia Reshetova, intombi kaTimati: isithombe ngaphambi kokuhlinzwa kokuhlinzwa epulasitiki
Ukuphila komuntu siqu ka-Marina Alexandrova
U-Olga Seryabkina: impilo yomuntu siqu nezithombe ezishisayo
Shish kebab kusuka ezinhlotsheni ezintathu zenyama
I-Horoscope ye-Virgin Woman ngo-Agasti 2016
Ikhekhe le-carrot ne-chinanasi namantongomane
Imfihlo yenhlanhla othandweni lobuthando
Kungani sesaba isizungu?
Kuthiwani nokuthi kuthinta kanjani impilo yentsha?
Izinhlobo zengqondo zomama ezinama-5: thola ukuthi ingane yakho izokhula kanjani